Anton’ny fitokonana teny amin’ ny 13 Mey : Tombontsoa manokana avokoa no tena notakiana -
AccueilSongandinaAnton’ny fitokonana teny amin’ ny 13 Mey : Tombontsoa manokana avokoa no tena notakiana
Hisokatra ary hahita ny tena hevitry ny fitokonana amin’izay ny mason’ny vahoaka malagasy taorian’ ny hetsika izay nokarakaraina sy notarihin’ireo depiote 73 tetsy amin’ ny kianjan’ ny 13 mai, satria dia voaporofo izao fa kisarisary natao ho an’ny tombontsoa manokana avokoa ireny fitariham-bahoaka ireny. Taorian’ny fanapahana izay navoakan’ny HCC mantsy dia nientam-po ary hita amin’ ny fihetsika asehon’ireo solombavambahoaka no tena tanjona, fa eo ny fitadiavan-tseza sy ny famahana ny olana manokana izay mamatotra ny lehiben’antokon’izy ireo. Marihina fa taorian’ny fivoahan’ ny anaran’ ny praiminisitra vaovao dia tsy ampihambahambana no nilazan’ny solombavambahoaka avy amin’ ny Mapar Razafitsiandraofa Brunelle tamin’ny onjam-peo tsy miankina iray teto an-drenivohitra fa tsy maintsy hisy ny hetsika goavana fanaovam-belona ny etsy amin’ ny 13 mai. Ankoatra izay dia tsy hanaiky izany kosa ny Tiako Madagasikara noho ny mbola tsy mampazava ny lalan-komban’izy ireo, tahaka ny hoe sao sanatria tsy azo ny minisitera izay ahafahana mamaha ny olan’ny antoko. Midika izany fa eo ny tsy fitovian-kevitry ny depiote 73, satria ny sasany efa nahazo izay iriany, ary ny sasany kosa mbola miandry izay higadonan’ny valin’ny fitokonana teny amin’ ny 13 mai.
Mba ahafantaran’ ny Malagasy rehetra ny tena zava-misy marina mikasika izay tombontsoa manokana sy ny tombontsoan’ ny antoko izay, dia efa nentina teto ohatra ny efa fihazakazahan’ ireo depiote nanatitra CV mba ho minisitra. Izay ilay vidin’ny fitariham-bahoaka voalohany teny amin’ ny 13 Mai raha tombontsoa manokana no horesahina. Raha ny tombontsoan’ny antoko indray dia efa hiarahan’ ny rehetra mahita io fiadiana minisitera, izay efa miseho amin’ izao fotoana izao io, ohatra azo raisina amin’ izany izao ny olan’ ny antoko TIM, ka ilàny ny minisiteran’ ny Serasera ho an’ ny MBS, varotra ho an’ ny Tiko AAA, ary takiana fa tsy ho azo mihitsy satria mazava ny fanapahan’ny HCC dia ny minisiteran’ ny Fitsarana ahafahana mamaha ny olana ara-pitsaran’ingahy Ravalomanana. Ny tsara ho marihina anefa dia niara-dia tamin’ ireo solombavambahoaka 73 ireo ny sendika maromaro, saingy samy nahita ny vahoaka rehetra indrindra ny mpanara-baovao fa tsy voaresaka intsony ny hoe fangatahan’izy ireo anton’ny fanarahana ny hetsika izay notanterahin’ny solombavambahoaka 73. Moa va izany tsy fitiavan-tenan’ireo solombavambahoaka izay nanao fitaovana ny mpanara-dia azy ireo .
Raha horesahina indray ny fahatongavana amin’ny tanjon’ny tolona ara-pitsarana, dia tsy azo hiodivirana ny tsy hiresahana ny fivoahan’ny kolonely Lylyson tany amin’ny tany izay niafenany, moa va tsy nahazo tombony ny Mapar vokatr’izany. Raha tsiahivina moa dia anisan’ny efa nitarika fanonganam-panjakana niainga tamin’ny tanàna maty ny senatera Lylyson, ary voaporofo tamin’ ny antso nataony sy ny sakana nihazo an’Ambipo ihany koa izany . Saingy tafiditra resaka politikan’ny fitokonan’ny depiote 73 izany dia afaka ny lehilahy, na efa voafaritry ny lalàm-panorenana aza fa sazy mafy no miandry ny mpitarika sy mpanongam-panjakana. Noho io fivoahan’ ny kolonely Lylyson io ihany koa dia mipetraka ny fanontaniana hoe: ho sanatria ve hisy ny fitongilanana ho an’ ireo izay naiditra am-ponja noho ny raharaha politika. Ka noho izany ve tsy tokony hisy ihany koa ny famoahana an’ i Claudine Razaimamonjy izay voalaza fa nanodinkodim-bola, satria ny lalàna ambony indrindra eto amin’ ny firenena izay manafay sy manasazy mpanongam-panjakana no nohalefahana ka nampivoaka ny kolonely Lylyson. Midika izany fa ho afaka ihany koa mazava ho azy ireo olona nanatanteraka heloka voasazin’ny lalàna famaizana, satria tokoa politika eny an-dalambe izao no mihantra. Ireo rehetra ireo noho izany no tokony handalinan’ny rehetra, alohan’ ny hanarahana hetsika iray eny andalam-be, satria dia voamarina izao fa tombontsoa efa voakendry no ao ambadiky ny fitaritana olona fa tsy tombontsoan’ ny besinimaro.
Tsara hazava ety ampiandohana fa manana ny toerany sy maha izy azy ny masoivoho rehetra izay misy eto Madagasikara, ary ny anjara toerana izay tazonin’izy ireo dia ny fampifandraisana ny firenena malagasy sy ny firenena ...Tohiny